Fifidianana loholona : manaraka izay fanapahan-kevitra ofisialy ny Ceni - ewa.mg
News - Fifidianana loholona : manaraka izay fanapahan-kevitra ofisialy ny Ceni
“Ho an’ny Ceni, ny
rijan-teny eo an-tanana no iaingana amin’ny fanomanana hiatrehana
ny fifidianana. Raha misy, ohatra, ny adihevitra, araka ny lalàna,
izay tsy maintsy atao: misy ny rafitra misahana manokana amin’ny
fanomezana ny heviny na ny fangatahan-kevitra momba ny
lalàna mampiady hevitra.”
Izay ny fanazavan’ny
mpampaka-tenin’ny Ceni, Rakotondrazaka Fano, manoloana ny
adihevitra hoe ara-dalàna na tsia ny fanatanterahana ny fifidianana
loholona hatao ny 11 desambra. Raha milaza indray izay rafitra
fakan-kevitra izay fa misy fanitsiana na tsy araka ny tokony ho izy
ny fanatanterahana io fifidianana io amin’izany, manaraka izay
fanapahan-kevitra ofisialy ny Ceni.
Iraka ampanaovina ny Ceni ny
fikarakarana ny fifidianana. Maka bahana hatrany amin’ny fiomanana
amin’ny fikarakarana ny fifidianana ny fomba fijeriny sy ny
fiasany. Fa tsy hoe tonga ny vanin’andro hanatanterahana ny
fifidianana, nefa tsy tomombana ny fiomanana.
Ahitsy sy hatsaraina
Manangona ny didy avy amin’ny
Filankevi-panjakana ny amin’ireo raharaha nangatahina fandravana
didy ny Ceni amin’izao, araka ny nambarany. Enti-manitsy sy
manatsara ny lisitry ny mpifidy vaventy amin’io fifidianana
loholona io izany. Amin’ny 11 novambra no faranana tanteraka ny
lisitry ny mpifidy vaventy. Mandra-pahatonga izay, entin’ny Ceni
manatsara ny lisi-pifidianana izay didy tonga eo an-tanany.
Amin’ny 28 septambra izao ny
fandraisana ny antontan-taratasy firotsahan-kofidina. Tsy maintsy
mametraka ireo mpikambana ao amin’ny Rafitra mandray sy mpanamarina
an-tsoratra ny antontan-taratasy ny firotsahan-kofidina (Ovec) eny
anivon’ny fari-pifidianana, ny renivohi-paritany enina, ny Ceni.
Mialoha ny 28 septambra, tsy maintsy mahazo fiofanana avy amin’ny
Ceni foibe ireo mpikambana amin’izany.
L’article Fifidianana loholona : manaraka izay fanapahan-kevitra ofisialy ny Ceni a été récupéré chez Newsmada.
Atsimo Atsinanana sy Vatovavy Fitovinany: lavapiringa moderina 8.000 avy amin’ny Japoney
Natolotra ny minisiteran’ny Rano, omaly, tetsy Andraharo ny lavapiringa ara-pahasalamana Sato na (safe toilets) miisa 8.000 ho an’ny ankohonana marefo miisa 8.000 any amin’ny faritra Atsimo Atsinanana sy Vatovavy Fitovinany, izay iarahana manatanteraka amin’ny Unicef.Mitentina 26.000 dolara na 98 tapitrisa Ar ny vidin’ireo fitaovana fanamboarana kabone ara-pahasalamana ireo. Fitaovana mora diovina sy mora ampiasaina ary manaraka ny fenitra ara-pahasalamana tsy hampiparitaka ny loto. Iandraiketan’ny orinasa japoney Lixil ireo fitaovana sy kojakoja fanamboarana izany.Tafiditra ao anatin’ny tetikasa Madagasikara Madio ary hanatrarana ny tanjona dia ny fanafoanana ny fanaovana maloto ankalamanjana izao tolotra izao. Maro ny tetikasa entina amin’izany.Hanova sy hanatsara ny fomba fiaina amin’ny sehatry ny fahadiovana sy ny fidiovana ny fahazoan’ireo tokantrano izao fitaovana izao, hoy ny minisitry ny Rano sy ny fahadiovana ary ny fidiovana, Rakotovelomanantsoa Voahary.Homena fiofanana amin’ny famokarana lavapiringa “dalle sanplat” ihany koa ireo mpitantan-draharaha 82 ao Atsimo Atsinanana sy 38 ao Vatovavy Fitovinany.Tatiana AL’article Atsimo Atsinanana sy Vatovavy Fitovinany: lavapiringa moderina 8.000 avy amin’ny Japoney a été récupéré chez Newsmada.
Andranovory: basy Kalachnikov iray nisy namerina tamin’ny zandary
Basy Kalachnikov iray no azon’ny vondrontobim-pileovan’ny zandarimaria Atsimo Andrefana tao Anketa/Tanindraza, kaominina Andranovory, distrikan’i Toliara II, afakomaly. Nandritra ny fitsidiham-paritra nataon’ny kolonely kaomandin’ny vondrontobim-pileovan’ny zandarimaria ao anatin’ny hetsika fampandrian-tany no nahazoana ity fitaovam-piadiana mahery vaika ity. Nanamafy ny zandary fa tsy mitsahatra manao ezaka ny mpitandro filaminana, araka ny fitondram-panjakana mba hanangonana ireo basy mahery vaika any am-pelatananan’ireo izay tsy nahazo fahazoan-dalàna mba hampandriana ny fahalemana. Naneho fisaorana hatrany ireo olona tsara sitrapo manoro na manatitra ireny basy hitany ireny ny zandary. Efa nanao antso avo rahateo ny Filoha Rajoelina amin’ny hamerenana ireny basy mahery vaika tsy ara-dalàna any am-pelatanan’olon-tsotra ireny.Jean ClaudeL’article Andranovory: basy Kalachnikov iray nisy namerina tamin’ny zandary a été récupéré chez Newsmada.
Efa zary fomba fitenin’ny vahoaka ifotony amin’izao ny hoe fahefana mahefa, rehefa mitaraina na mangata-bahaolana amin’ny fahasahiranana manjo azy izy: tsy fandriampahalemana, ady tany, famatsian-drano, fanaovana tohodrano, fanamboaran-dalana… Angaha misy fahefana… tsy mahefa? Mila mahefa na mahavita izay andrasana sy takina aminy ny hoe fahefana: fahavitana.Eo an-tanan’ny hoe fanjakana na fitondrana ny vola enti-miasa, ny fitaovana, ny olona… Nampindramina ny fahefana na fahavitana ny fitantanana izany ho amin’ny fampandrosoana ny firenena sy ny fanatsarana ny fiainan’ny vahoaka hatrany ifotony izy. Mandritra ny fe-potoam-piasana voafetra ihany izany, izay nanaovana fifanekena mazava amin’ny alalan’ny lalàna fanorenana na fototra ijoroan’ny firenena.Araka izany, tokony hahefa na hahavita izay nampantenaina sy ny fanamby nifanaovany tamin’ny vahoaka ny mpitondra. Maika avokoa ny zava-drehetra amin’izao fotoana izao? Tsy vitan’izay, samy miady izay ho azy ny isam-paritra, kaominina… Tsy misy intsony ny hoe distrika hohadinoina amin’ny fampandrosoana? Na zanak’Ikalahafa… Antananarivo tsy vita indray andro, vao mainka i Madagasikara manontolo.Manao izay ho afany sy efany amin’ny fampandrosoana ny fitondrana amin’izao? Fanarenana sy fanorenana amin’ny lafiny toekarena, sosialy, kolontsaina… Tsy ilaozan’izay mampikaikaika amin’izay manjo etsy sy eroa. Tsy misy mihaino na mijery ifotony, tsy misy tatitra miakatra… ? Izay no zary maharatsy endrika ny fitondrana noho ny fitokonana, fanairana, fitakiana, fanomezan-tsiny, fampitandremana, fitsikerana…Efa fahitana na aiza na aiza izany, na oviana na oviana. Mampanontany tena rehefa ho lava na miverimberina ny toe-javatra sasany: tsy hita, tsy ahitam-bahaolana… ? Na ampiandrasina, na miandry baiko… Mila fahefana mahefa hatrany ifotony. Saika ny fitondrana foibe no hany fantatry ny vahoaka? Nampanantena azy… Eny, na ny isan’ambaratonga sy isan-tsehatra any ho any aza no manao ny ataony. Mila fiovana na fanovana?Rafaly Nd. L’article Fahefana… mahefa a été récupéré chez Newsmada.
« Miss Mada »: tsara fandraisana i Valeris Binguira
Ny asabotsy 8 desambra teo, noraisin’ny fikambanan’ny zanaka Analanjirofo miray (Ami) sy ny fikambanan’ny zanaky ny faritanin’i Toamasina (Adopte) sy i Fenoarivo Atsinanana (Fizafen), tarihan’ny filohany, ny dokotera Bezandry Désiré, tamim-pomba ofisialy, i Valerie Binguira, voafidy ho Miss Madadascar. Tamin’ny fomba tsotsotra ny fandraisana fa tena nasian’ny rehetra hasiny sy lanjany kosa.Raha ny tatitra nataon’ireo raiamandreny ara-drazana sy ny filohan’ny Adopte, Atoa Kalo Narcisse, « tamin’ny taona 1960 no nisian’ny zanak’i Fenoarivo voafidy ho Miss Mada farany ary izao indray vao nisy tafavoaka amin ‘izany ». Nohamafisin’Atoa Kalo Narcisse, filohan’ny zanaky ny faritanin’i Toamasina, hatrany fa « tsy ratsy tarehy akory ireo mpifanadrina taminao, saingy anjaranao ilay izy ka hifaliantsika zanaky ny faritra Analanjirofo. Tsy azo entina ho fisehosehoana ety ivelany anefa izany fa ilaina ny fampiarahana ny hatsaran-tarehy sy ny bika, miaraka amin’ny fahaizana sy fanahy ary toetra mendrika ny fiarahamonina. Ireo rahateo no takin’ny fisafidianana tahaka izao ». Sajo L’article « Miss Mada »: tsara fandraisana i Valeris Binguira a été récupéré chez Newsmada.
Vondrona eoropeanina (UE): 750 miliara euros ho fanarenana ny toekarena
Nahita marimaritra iraisana ihany ireo mpikambana 27 ao amin’ny Vondrona eoropeanina (UE), rehefa nivory nandritra efatra andro sy efatra alina, raha tokony ho roa andro. Io ny fivoriana lava indrindra hatramin’izay, tany Bruxelles. Ho fanarenana ny toekarena noho ny voka-dratsin’ny Covid-19 ny niaraha-nidinika. « Fifanarahana matotra, mafy orina ny vitan’ny UE amin’izao fotoan-tsarotra izao », hoy i Charles Michel, filohan’ny filankevitra eoropeanina.750 miliara euros ny hoenti-manana : 390 miliara euros fanampiana zaraina amin’ny tany mpikambana, ary 360 miliara, fampindramana. Miainga avy amin’ny fandaharanasan’ny firenena isanisany ny fototry ny fanarenana. 70 % amin’izany tetibola fanarenana izany, homena amin’ny 2021-2022, araka izay mila vonjy maika : mponina sy sosialy, indrindra ny tahan’ny tsy anasa, nandritra dimy taona farany.Ny ambiny 30 % homena amin’ny 2023, jerena araka ny fatiantoka teo amin’ny harinkarena faobe 2020-2021, izany hoe, fiantraikan’ny coronavirus mivantana. Hita amin’izany tetibola izany koa ny atokana ho fampandrosoana ny any ambanivohitra (7,5 miliara) ho fanohanana ireo faritra tratra aoriana amin’ny fampiasana angovo azo havaozina (10 miliara), ary ho an’ny fikarohana (5 miliara).Zahan’ny komity ao amin’ny UE ny fandaharanasa fanarenana any amin’ny firenena tsirairay, ary tsy maintsy mahazo fankatoavan’ny maro anisa ao amin’ny tany mpikambana sy ny mponina. Laharam-pahamehana soritana ny mahakasika ny sehatra tsy miankina amin’ireo lalam-piahariana voadona mafy. Nifanenjana sy nifandresy lahatra tamin’ireo firenena dimy: Suède, Pays-Bas, Autriche, Finlande, Danemark, ny 22 hafa. R.MathieuL’article Vondrona eoropeanina (UE): 750 miliara euros ho fanarenana ny toekarena a été récupéré chez Newsmada.
Anaran-tsy very: niaina ny dingan’ny tantara sy ny tolom-bahoaka Ramaroson Laurent
Iza izy? Teraka taoriana kelin’ny hetsi-panafahana ny tanindrazana ka nampamaivay ny fanenjehana, ny taona 1950, Ramaroson Laurent. Tao anatin’ny faramparan’ny fanjanahantany ny fahazazany raha ny fiandohan’ny fahatanorana kosa ny tamin’ny Repobolika I. Izany hoe, Fahaleovantena an-taratasy. Tapany faharoa kosa teny amin’ny oniversite, tao anatin’ny Repobolika II (RDL). Vita fianarana fony Repoblika III. “Niaina ireo dingan’ny tantaran’i Madagasikara aho ary nandray anjara feno tamin’ireo “tolom-bahoaka” nifanesy hatramin’izay teto amin’ny firenena”, hoy izy. Anisan’ireo mpitarika teo amin’ny fikatsahana ny fanovana Ramaroson Laurent. Nohitsiny fa tsy ireo mpitolona hatrany no nitondra na nahazo fahefana fa na izy, lasa olon-kafa na nivadika tamin’ny fotokevitra niarahana nitolona.Ankoatra izany, fikomiana anatin’ilay zanaka tantsaha teo anoloan’ny fiangaran’ny fiarahamonina ny nanosika ahy hitolona, nanomboka hatramin’ny fahakely hanovana izany, araka ny nambarany. Ny fandraisana anjara tamin’ireo hetsika rehetra nanomboka tany amin’ny taona 1971/1972 no nanefy azy. Niampy ny famolavolana tao amin’ny Fikambanana demokratikan’ny mpianatra malagasy (FDMM) niara-dia tamin’ny AKFM notarihin’ny pasitera Andriamanjato Richard.Sahy nametra-pialana tsy ho filoha lefitra…Asa andavanandro ataony ny fampianarana ny taranja filozofia. Niditra teo amin’ny sehatry ny fandraharahana momba ny vatosoa koa ny tenany. Manampy izany, anisan’ny mpitarika ny “Fédération des associations des étudiants de Madagascar – FAEM” fony teny Ankatso. Efa sekretera jeneralin’ny Sendikan’ny mpampianatra (Fisema) sy ny Fedmines sy ny Conecs… Efa sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Kolontsaina sy ny serasera (MKS) ny taona 1976. Efa depiote voafidy indroa miantoana teny amin’ny Firaisana V.Nomarihiny fa voalohany nanamarika ny tantara ny nametrahany fialana amin’ny maha filoha lefitry ny Antenimierampirenena noho ny fandavana ny firaisana tsikombakomba amin’ireo noheveriny fa ratsy tamin’izany.Momba ny fitantanana ny ady atao amin’ny Covid-19 kosa, nambarany fa tokony hosedraina mandritra ny 15 andro aloha ny rafitra raha ny ankehitriny. Hatao matotra sy hentitra ny fananganana haingana ny rafitra mpanara-maso ny fitantanana ny fampiasam-bola sy ny fitaovana. Eo koa ny fomba fiasan’ireo misehatra amin’ity ady atao ity. “Omena fahefana ampy hiasany izany rafitra izany. Foanana ny fakana tahaka befahatany ateraky ny “hambo diso toerana” nolovana tamin’ny Frantsay tia manakiana sy tia miady hevitra nefa tsy mamokatra lava”, hoy izy. Nohitsiny fa vaksiny aloha izany izao no ilaina maika ka tokony hatao haingana sy hatao ho an’ny olon-drehetra. Miara-miainga amin’io aloha, araka ny nambarany. “Aleo ho an’ireo “mpikarama an’adin’ireo Big Farma sy ny tsenam-baksiny ny resabe”, hoy ihany izy.Misy Malagasy mahay, afaka manafatra mpitsabo kiobanina.Misy fanafana sy fanafody matoa mandaitra amin’ny Malagasy ilay Covid-19 raha ny finoany. Misy koa ny Malagasy afaka mitsabo izany.Eo amin’ny lafiny politika, nitondra ny heviny amin’izao fitsanganan’ny HCC vaovao izao ny tenany. “Tokony hatao aloha ny fampifanandrifiana ny “lamina” politika niainana tato ho ato amin’ny lalàmpanorenana. Anisan’izany ny fitsinjaram-pahefana sy ny governora ohatra ahoana ?”, hoy izy. Nanteriny fa tsy mitady seza na vola ny tenany. Antso ny firotsahana eo amin’ny politika. “Velona ho an’ny hafa. Io no “mobile” fa tsy “motif”!”, hoy izy.Nangonin’i Synèse R.L’article Anaran-tsy very: niaina ny dingan’ny tantara sy ny tolom-bahoaka Ramaroson Laurent a été récupéré chez Newsmada.
Fotodrafitrasa iarahana amin’ny AFD: miroso amin’ ny fametrahana tara ny lalambe «Rocade»
Mitohy hatrany ny asa fanamboarana ny lalambe Rocade Atsinanana, sy Rocade Avaratra Atsinanana mampitohy ny By-Pass hatreny amin’ny Marais Masay. Nanomboka ny zoma teo ny fametrahana ny tara « couche de base en grav-bitume », amin’ity làlana ity. Mirefy 400 m isan’andro eo ny halavan’ny làlana voarakotra amin’izany. Sosona telo ny firafitry ny arabe. Teo ny fanotofana ny tany, mahatratra hatramin’ny 8 metatra ny ahavony ambony indrindra. Manaraka ny « couche de base grav-bitume », mirefy 15 sm ny aavony ary farany ny «couche de roulement béton bitumineux», mirefy 6 sm ny aavony.Mampifandray ny RN2, RN3, RN4 ary RN7… Mampifandray ny l?lam-pirenena faha-2, faha-3, faha- 4 ary faha-7 ity Rocade ity, ary natao hampirindra kokoa ny fifamoivoizana sy hanalefaka ny fitohanana amin’ireo toerana eto an-drenivohitra. Mirefy 7,2 km mizara ho ampahan-d?lana roa ka By-Pass mankeo amin’ny sampanana Ambohi­ma­hitsy ny iray. Ny sampanana Ambohimahitsy mankeo amin’ny «rond point» An­drano­bevava ny iray hafa, miampy ny ampahan-dàlana «Pénétrante urbaine» 1 km, miainga eo amin’ny sampanana Nanisana ambany mivoaka eo amin’ny Station Shell An­kadindramamy. Misy fotodrafitrasa roa lehibe amin’ity lalambe ity. Eo ny tetezana mirefy 20 m eo amin’ny re­ni­ranon’Ampasimbe sy tetezana mirefy 47 m eo Ankadin­dra­mamy. Tokony ho vita amin’ny faran’ny volana avrily 2021 ny fanamboarana ity Rocade Atsi­nanana-Avaratra Atsina­na­na ity.Fotodrafitrasa amin’ireo tanàn-dehibe Anisan’ny voaresaka tamin’ny fanaovam-beloma nataon’ny tale jeneralin’ny AFD, i Rémi Rioux, handao an’i Madagasikara ny momba ny fanamboarana io lalana io. «Nahitam-bokany tokoa ny fiaraha-miasa teo amin’ny roa tonta tao anatin’ny fotoana niasako teto izay. Betsaka ireo tetikasa natomboka sy vita. Eo ny fanamboarana ny làlana Rocade, ny fanajariana ireo tanàn-dehibe antsoina hoe «Ville d’équilibre» amin’ny alàlan’ny lamin’asa Padeve , any Toliary sy i Fianarantsoa ary Antsiranana», hoy izy. Notoloran’ny minisitra Andri­a­nainarivelo Hajo ny mari-boninahitra «Chevalier de l’Ordre National Malagasy» izy ho fankasitrahana ny asa vitany, tetsy Anosy ny zoma teo.Synèse R.L’article Fotodrafitrasa iarahana amin’ny AFD: miroso amin’ ny fametrahana tara ny lalambe «Rocade» a été récupéré chez Newsmada.